Umlando Wenkampani | Imikhiqizo Solid Co., Ltd.
UMnu Zhao usungulwe I-Hangzhou I-Chengxin Insimbi Ukuhweba Co., njengoba Umthengisi ogunyaziwe we- imikhiqizo yensimbi kanye ukuphakamisa amasilingi ngoba Igridi Kazwelonke, ophakathi kweChina Top 100 yiFortune Magazine. Namuhla sisesebhizinisini lemikhiqizo yensimbi njengebhizinisi lethu elixhasayo.
Saqala ukukhiqiza ngokwenza zombili Izintambo neWebbing. Kepha ngaleso sikhathi, sisebenzisaI-Polypropylenentambo njengempahla yethu eluhlaza. Ngakho-ke, umkhiqizo wenzelwe i-Umsebenzi Ophakathi Nokhanya imikhiqizo.
Sathenga umhlaba wethu e-Anji eduzane ne-Hangzhou edolobheni futhi sakha i- Isakhiwo se-3-Floor(ngamamitha ayisikwele angama-8500) njengenkampani yokweluka. Kusukela lapho, thinasandise ibhizinisi lethu kusuka kumikhiqizo ye-Medium and Light Duty kuya ku-Super Heavy ne Imikhiqizo esindayo ngoba kokubili imikhiqizo yabathengi neyezimboni.
Sandisa umkhiqizo wethu sisuka ku-1 Isakhiwo siye ku- 3 Izakhiwo. Futhi manje sesinezakhiwo ezi-2 ezengeziwe, enye ngeyensimbi futhi enye ngeyokuhlola kanye nendawo yokugcina impahla. Ngokuphelele, sesidlulileAmamitha ayisikwele ayi-15,000.
Namuhla sisebenza ngaphansi komkhiqizo we Imikhiqizo Eqinile enikeza amaklayenti ethu uhla oluphelele lwe Izintambo zeCargo Control & Bungee imikhiqizo yezimakethe zabathengi, kanye nohla olugcwele lwezimpahla Ukuqhuma nokuphakamisa imikhiqizo yezimakethe zezimboni.